Kedu ihe bụ ọka maka ahụike mmadụ? - Cornel - 2019
Cornel: eji, uru bara uru na contraindications
A na-amata ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa nke ogologo oge ma jiri ya na nkà mmụta ọdịnala dị iche iche. Ọgwụgwọ cornelian nwere ike ọ bụghị nanị ịgwọ ọrịa, ma ọ tọrọ ụtọ, ọ bụrụ na ọ bụ jam na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ ọgaranya na-atọ ụtọ.
Ọgwụ ọgwụ nke cornel
Otu esi enweta ma na-echekwa ọgwụ ọgwụ nke cornel
Iji mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike
Iji nagide nrụgide
Na isi ọwụwa
Na ọrịa hemorrhoid
Na afọ ọsịsa
Na-arịa ọrịa shuga
Uru nke dogwood maka ụmụ nwanyị dị ime na ụmụaka
Otu esi eji dogwood na cosmetology
Nkwekọrịta na mmetụta ndị nwere ike ime
Ihe mejupụtara chemical na caloric ọdịnaya nke cornel
Mkpụrụ ọka Cornel (sucrose, glucose, fructose), pectin, carotenoids, tannins, tannins, coloring pigments (anthocyanins), ọgwụ acid (citric, malic, tartaric, succinic), phenol carboxylic acids (potassium, calcium, magnesium, sodium, phosphorus), ihe nchọta (iron, zinc, manganese, iodine), mmanụ dị mkpa, phytoncides, catechins.
Uru Energy nke 100 g nke tomato:
carbohydrates - 9 g,
organic asịd - 2 g,
eriri nri - 1.5 g,
mmiri - 85 g,
Akwụkwọ ndị ahụ nwere tannins, flavonoids, tannins, iridoids. N'oge ogbo ọka, epupụta na-ejikọta vitamin C na E. Glycoside, anụ ịnyịnya (ọgwụ nje antimalarial), tannins na salicylic acid dị na ogbugbo na mgbọrọgwụ, a na-achọtakwa mmanụ abụba n'ime osisi. Caloric ọka - 45 kcal kwa 100 g nke mkpụrụ.
Ọ dị mkpa! Cornel nwere ihe vitamin C karịa citrus mkpụrụ, strawberries na gooseberries - 50 mg kwa 100 g nke tomato.
Cornel nwere ọtụtụ ihe bara uru.
Ọ nwere mmetụta bara uru na usoro nchịkọta nri: mma agụụ, na-ewusi secretion nke afo, na-enyere aka na mkpịsị obi mkpasu iwe, inye astringent na mgbochi mkpali utịp, normalizes metabolism, na-enyere aka na-efu ibu. Ọ bara uru maka ọrịa ọbara (anaemia) na usoro ọbara: na-ewusi mgbidi nke arịa ọbara, na-edozi ọbara mgbali elu, na-enwewanye hemoglobin. Nwere mmetụta antipyretic.
Njiri elu nke phytoncides na tomato na-enye gị ohere ịlụ ọgụ megide ọrịa ndị na-efe efe, na pectins na-asa ahụ nke ngwaahịa metabolic, ọla arọ. A na-eji Cornel mee ihe na mgbochi ma ọ bụrụ na e nwere ihe ize ndụ nke nsị site na mmiri na-egbu egbu (ụzọ na mercury vapo).
Ọhụrụ tomato na ngwaahịa ha na-ọma toned na ike ahụ.
Akwụkwọ ndị ahụ nwere hypoglycemic, bile na diuretic utịp, na ogbugbo nwere anti-fever na antipyretic Njirimara. Akwụkwọ ma ọ bụ ụbụrụ tinctures na-agwọ ọrịa anụ ahụ (eczema, ọrịa anụ ahụ).
Njirimara ọgwụ nke mgbọrọgwụ ọkael dị ezigbo ọnụ: a na-ewere decoction ya maka ịba. Ọkpụkpụ Cornel nwere ihe ndị na-agụ kpakpando na ndị na-eme ihe na-adịghị mma, bụ nke dị mkpa n'ịgwọ hemorrhoid.
Ị ma? Enwere ihe akaebe na ndị America mbụ si mba ọzọ jiri nkịta katịa ezé ha, ndị Amerịka na-agbapụkwa osisi.
A na-egbute ọka Cornel mgbe ripening (na September) na ihu igwe. A pụrụ ịhazi tomato ọhụrụ n'ime blanks (jam, compote) ma ọ bụ nke a mịrị amị. Mgbe a na-ehichapụ, a na-echekwa ihe bara uru. A ghaghị ịgbasa mkpụrụ osisi na mpempe akwụkwọ dị mkpa, nke a mịrị amị n'anyanwụ ma gụchaa ya na ọkpọ nkụ, na oven ma ọ bụ n'ụzọ nkịtị. Mkpụrụ osisi a mịrị amị na-atọ ụtọ.
A na-echekwa mkpụrụ osisi mịrị amị ruo afọ atọ.
A na-egbute akwukwo Dogwood mgbe okooko (June-July), mgbe ọnụ ọgụgụ ndị na-emepụta nri dị ukwuu karị, ewepụkwa ogbugbo ahụ site na ntanaka alaka na mmalite oge opupu ihe ubi.
A na-egbute mgbọrọgwụ na mmiri ma ọ bụ ụbịa. A ghaghị kpochasị akụkụ nke vegetative a gbakọtara nke ọma ma kpochaa ya n'okpuru ebe mgbochi n'ime ụlọ a na-agbagharị. Enwere ike ịchekwa ihe ndị dị na linen ma ọ bụ akpa owu na-etinye aka na akọrọ maka ihe dị ka afọ abụọ.
Ị ma? Ha na-eme ihe ọṅụṅụ, na-edozi, na-eri nri achicha, sirop, jelii na kissel, jam, marmalade, marmalade, marmalade, tincture, liqueur, mmanya si na tomato. Cornel bụ ezigbo ewu na Caucasus, ebe ha na-esi nri, azụ na nri maka nri na azụ, na achịcha pita.
N'ihi ọtụtụ ihe bara uru, dogwood aghọwo ihe eji agwọ ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ.
N'ime izu ị ga-eri ọkara iko nke ọhụrụ dogwood tomato kwa ụbọchị ma ọ bụ na-aṅụ bred bred na mmanụ aṅụ. Nke a ga - enyere aka rụọ ọrụ nchebe nke ahụ megide oyi.
Maka ịmasi nsogbu nke usoro ụjọ ahụ (nrụgide, nhụjuanya ụjọ), a na-atụ aro decoction nke mkpụrụ osisi a gwakọtara aghara aghara. Nri tomato na-eme ka enwekwu ntachi obi.
Cornel na-edozi nrụgide nke ụbụrụ, ọ na-aṅụkwa ya site na nchịkọta anụ ahụ. Mgbe migraine na ebe nke ihe mgbu dị gị mkpa itinye ihe mmiri nke tomato ọhụrụ tomato, ọbọp ke cheesecloth.
Na oyi na-atụ, ọ dị mma iri ọka chalịka, mmanụ ọhụrụ na nke akpọnwụ na-adị mma maka flu, akpịrị akpịrị, uhie na ọnyá. Maka ịlụ ọgụ megide oyi na mmiri ịkwadebe efere curative. Ịkwesịrị ịwụ abụọ tablespoons nke ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị tomato na otu iko mmiri na obụpde n'elu obere okpomọkụ, na mgbe awa 8, wepụ mkpụrụ site na osisi ma gbute anụ ahụ. A gha na-ewere efere na mgbakwunye mmanụ aṅụ ugboro abụọ n'ụbọchị, 50 ml.
Ọ dị mkpa! Iji mee ka nri dịkwuo mma, a na-atụ aro ka ọka rie n'ụtụtụ. Ọnụego kwa ụbọchị bụ 200 g nke tomato.
Ihe kachasị mkpa maka ọgwụgwọ ọrịa ahụ bụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ụzọ kachasị mfe bụ iri 15 mkpụrụ osisi dum ọtụtụ ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ mee ka jam si na ha. I nwekwara ike iji iko nke osisi ma obu uzuzu mee ha, nke a kwadebere site na kilogram nke mkpuru osisi n'ime uzo ato n'otu ugboro kwa ubochi.
E nwere ọtụtụ ntụziaka maka ịgwọ ọnyá afọ na cornel:
Nchọpụta nke okpukpu abụọ nke mkpụrụ osisi ọhụrụ ma ọ bụ akwụkwọ a mịrị amị na otu iko mmiri: esi nri maka minit 10-15, hapụ maka awa asatọ, were ọkara otu iko tupu i rie nri.
Decoction nke abụọ tablespoons nke mkpụrụ osisi mịrị amị nke dogwood na otu iko mmiri: wunye esi mmiri n'elu tomato, esi nri maka 30 nkeji. Were 100 g ugboro atọ n'ụbọchị.
Ngwunye nke okpukpu abụọ nke tomato na otu iko esi mmiri: esi ọnwụ 8 awa, were 100 g ugboro abụọ n'ụbọchị.
Kissel: 50-60 tomato nke dogwood na 0,5 lita mmiri iji sie nri, ruo mgbe agbazere tomato. Dowe tupu nri. Nke a otu kissel bara uru maka izugbe ahụ ike na ọgwụgwọ nke beriberi.
Efere site na rheumatism mejupụtara a teaspoon nke anuahade dogwood mgbọrọgwụ na 300 ml mmiri. A ghaghị esie ya maka minit 20 n'elu obere okpomọkụ, wee hapụ awa ole na ole. Na-aṅụ abụọ tablespoons ọkara otu awa tupu nri ugboro atọ n'ụbọchị.
A na - edozi ọgwụ maka etuto na mmanụ dị iche iche site na sie dogwood ogbugbo na ọka bali n'ogologo. A na-etinye nchịkọta ahụ na obụpde ma chekwaa ya na bandeeji. Mgbe awa 4-6 ga-agbanwe.
Mkpụrụ ọka ọka ọhụrụ nke na-arịa ọrịa shuga na-atụnye aka na pancreas na usoro nsị, na-achịkwa ọkwa glucose ọbara. Ọkara otu ihe ọṅụṅụ mmanya kwesịrị ịṅụ ihe ọṅụṅụ otu ọkara elekere tupu nri, ma ọ bụrụ na ahụ na-egbochi ya nke ọma, ị nwere ike ịmekwu ihe oriri gị na iko. Mgbe ụbọchị 10 nke ịbata ọ dị mkpa iji kwụsịtụ ahụ.
Ọ dị mkpa! Tupu ojiji, a ghaghị ịsacha tomato nke dogwood na mmiri na-agba ọsọ ma ọ bụ ọbụna sie ya mmiri. A ghaghị ịkwadebe efere na mgbakwunye nke ọka na -eme tupu oriri, iji zere iwelata ọnụ ọgụgụ nke ihe bara uru (dịka ọmụmaatụ, oxidation nke ascorbic acid).
Ịṅụ ọgwụ dogwood na-abaghị uru dị oké ọnụ ahịa n'ahụ nwanyị ahụ mgbe ọ dị ime, ebe ọ nwere ọtụtụ ihe bara uru na vitamin, ọ nwekwara ike belata nsí. Iji mee ka obi na-arụ ọrụ ma na-ewepu mmiri site na ahụ chọrọ potassium dị na cornel. Ọzọkwa, cornel nwere mmetụta dị mma na usoro ọbara: na-ewusi mgbidi nke arịa ọbara, na-edozi ọbara mgbali elu ma na-abawanye ọdịnaya nke hemoglobin. Ọ dịkwa uru maka usoro nchịkọta nri.
Maka ịmalite ịmalite nke nwa ahụ, ọrịa oyi na ọrịa na-ebute ọrịa nke nne dị ize ndụ. Iji dogwood, ọ bụghị nanị na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike, ma na-emeri ọrịa ahụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ejighị ọgwụ eme ihe.
Ọzọkwa, dogwood bara ezigbo uru maka ụmụaka. Ọ na-enye obere ahụ nwere uru ndị bara uru maka ọganihu na mmepe: vitamin (karịsịa ascorbic acid), carotene, pectins, glucose, fructose, bioflavonoids, salts minerals. Ha dị oke mkpa maka uto na mmepe nke ọkpụkpụ anụ, normalization nke metabolism, na-emetuta ụjọ, ọbara, digestive, usoro nkwụsị. Maka umuaka, i nwere ike isi nri nke oma na ahihia ma obu ihe ndi ozo.
Ọ dị mkpa! Na ụba uterine na egwu nke ime ọpụpụ, a machibidoro iji nkịta nkịta maka ụmụ nwanyị dị ime.
Nkịta na-eme Dogwood na-enyere aka ịnagide nsogbu nke akpụkpọ anụ: ha na-ekpochapụ ọkụ, na-eme ka ọtụtụ ndị na-eto eto ma na-edozi akpụkpọ ahụ na ihe bara uru.
Dogwood mask Ezi ntụziaka dị ezigbo mfe. Ọ dị mkpa ka tomato sie, gbue ha ka ha mee ihe dị ka tablespoons abụọ, jikọta ya na ihe ndị ọzọ, tinye ya na ihu maka minit 15-20 ma kpochaa mmiri dị jụụ.
Maka mmanu mmanu:
acha ọcha, ọkara teaspoon nke starch;
a teaspoon nke stachi, a teaspoon nke oatmeal.
Maka nsogbu akpụkpọ anụ:
okpukpu abụọ nke mmiri ịnweta mmiri, atọ atọ nke lavender mmanụ dị mkpa.
abụọ tablespoons nke rye bran, a teaspoon nke soda soda. Rinse na mmiri acidified acid.
Maka akọrọ akpụkpọ anụ:
banana na mmanụ oliv.
a teaspoon nke stachi, a teaspoon nke ala oatmeal, abụọ tablespoons nke banana pulp.
A na-eji masket tomato nke dogwood, mmanụ na-acha ọcha na ụrọ na-acha ọcha iji mee ihe mkpuchi maka ntutu na isi awọ. Iji mee ka ntutu dị ike ma nye ya ìhè ọbara ọbara, maka ịṅụ mmiri na-eji decoction nke tomato.
Ị ma? Site na mmiri olulu ị nwere ike ịṅụ mmanya kọfị. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịsa ọkpụkpụ, kpoo ha na frying pan, na-egweri ma na-agba na Turk.
Iji cornel nwere ụfọdụ contraindications.
Iji oké nkịta mee ihe n'ụzọ dị njọ nwere ike imetụta ọrụ akụrụ na usoro nchịkwa. I nweghị ike iri ọka na acidity ma ọ bụ afo ọnya, afọ ntachi, allergies. A naghị atụ aro ka ị rie ya n'oge ụra na na ụra ehira: cornel nwere ọchịchọ ime ka usoro ahụ dị egwu.
Maka ụmụaka, ọ dị mkpa ka ị ghara iri dogwood n'ọtụtụ buru ibu. Nke a na - akpalite nsogbu digestive (gbaa ụka, afọ ọsịsa,), na ọtụtụ ihe ụfọdụ bara uru dị na - ahụghị ya n'ahụ, ebe ọ bụ na ha enweghị ike imubanye. Nnukwu dose nke ascorbic acid nwere ike iweli ọrịa ụfọdụ nke akụrụ na akụkụ anụ ahụ.
Nnukwu uhie uhie nke dogwood bụ ezigbo ihe a na-ahụ maka akụkụ ahụ ike gwụrụ. Ọ bụrụ na ị jiri ya mee ihe n'ụzọ amamihe dị na ya, ọ ga-enyere gị aka ịnagide ọrịa, nye ike na melite ahụ ike.
Mgbe na-eri nri tomato seedlings na otú e si eme ya
Ụdị rabbits onye ukwu nke Belgium: atụmatụ nke ịkụ anụ n'ụlọ
Eji aka aka ha mee ka ndị na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmanya
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Cornel: eji, uru bara uru na contraindications